Nbudata oku na Dubai na United Arab Emirates 🥇
nbanye na Dubai.dubaicitycompany.com / tag / ekwentị-ekwentị-mbanye / "> Ekwentị mbanye na Dubai
Mwepụ ekwentị na Dubai. Dị ka ihe mere, Citylọ Ọrụ Dubai City na-ewere nzọụkwụ n'ihu maka uto na ahịa mbanye na Gulf maka ndị India. Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ anyị emepụtala ngwaọrụ mbanye ọhụrụ yana ebe 2009 ma jikwaa mbanye mkpanaka kwekọrọ ekwekọ. Site n'ụzọ ọ bụla, igodo ụlọ ọrụ na ọganihu na-ama nke ọma na UAE dị na ahịa mbanye ahịa.
Ugbu a ndị na-ere ahịa na-eji ekwe ntị na United Arab Emirates. Dịka ọmụmaatụ, karịa 80% nke Ndị India na-achụsasị achọ ọrụ n'elu mobile. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ ụwa na-achọ ọrụ na-ejikwa akaụntụ Google ha naanị na-agagharị agagharị. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu ma nbanye na ekwentị mkpanaaka na-eme. Kpachapụ anya bụrụ onye a ma ama karịa na azụmahịa nwude n'ime 2019 na 2020.
N'ihi nke a, Citylọ ọrụ Dubai City na-agagharị ugbu a na Nduzi Dubai ọhụrụ ya maka ndị na-achọ ọrụ. N'otu oge, ọtụtụ ebe ndị isi ụlọ ọrụ dị na Marina Road na Deira-Dubai. Iji ngwa ekwentị dịka ekwentị ịnata CV ozugbo na igbe ozi email ha. Ndị ọrụ ekwentị na Dubai na-ebili kwa ụbọchị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji ekwentị kpọbata ndị ọrụ ọhụrụ n'obodo kachasị mma. Na-agụ ntụziaka anyị maka nbudata ekwentị na Dubai.
Gịnị bụ opekempe ahụmihe dị mkpa maka Dubai?
Ihe niile ihe nkiri na-eme njem na Dubai City Area. Ọ dị nwute na emere gị n'ihu onye isi nchịkwa. Yabụ, n'ọnọdụ ndị ahụ, ịkwesịrị inwe ezigbo ịmaliteghachi ntozu oke maka ọnọdụ ọ bụla. N'ezie, ị nwere ike ịhụ ọrụ nchịkwa enweghi ahụmahụ. Mana n'aka nke ọzọ nke na-agaghị akwụ ụgwọ, ị na-arọ nrọ banyere.
Ahụmịhe kacha nta ka ewee gota ya na UAE gbara gburugburu 2-3 Afọ nke ahụmịhe ọrụ. N'aka nke ọzọ n'aka ị nwere ike ịchọtara gị na Pakistan na Dubai. Ha ga-akwụkwa gị ụgwọ onye na-akwụ ụgwọ na Ọwara. Ọ dị mkpa ịghọta na ugbu a ụlọ ọrụ ụwa. Na-enyocha ndị na-eme egwuregwu n'ụwa niile. Ihe atụ ọzọ bụ Ndị na-achọ ọrụ na ndị South Africa. N’eziokwu, mba ọ bụla nwere ike ịga goro ọrụ na Emirates. Naanị ajụjụ bụ ha nwere ahụmịhe zuru oke n'obodo ha? Enweghị obere ahụmihe, ị nweghị ike ị rọrọ nrọ maka ọrụ ụwa niile.
Ụlọ ọrụ Dubai City enyere ndị ọrụ aka ịbanye maka ọrụ ná mba ọzọ. Dika nnabata nke otu ndi otu anyi, ndi mmadu n’acho inweta ndi ozo n’enye ha akwukwo. Karịsịa maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọrụ obodo. Can ka nwere ike chọta ọrụ n'aka ndị isi oche na Dubai City. Mana maka nke ahụ, ị ​​ga - enwe ike ijikwa ọrụ gị ngwa n’ogo di elu.
The ụlọ ọrụ mbanye na UAE
Ụlọ ọrụ anyị bụ nke mbụ ụlọ ọrụ na ahịa Middle East. Na nke kachasị mma n'iji ekwentị mkpanaaka maka nyocha ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta esi achọta ọrụ na Dubai na nleta visa karịsịa na ekwentị mkpanaaka gị. Ndị otu anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ịbanye maka ọrụ. Nbudata na mpi na-eto obughi so na UAE mana ụwa niile.
Anyị ji obi ụtọ na mbụ ọ bụ naanị ekwentị mkpanaka arụ ọrụ ụlọ ọrụ nbanye na Emirates. Anyị na-enyere ndị aka na ụdị aka ịchọta ọrụ na UAE. Karịsịa ndị nsogbu na-amasị saịtị ọrụ ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ. Ndi otu anyi na-enyere ndị ọzọ aka dị ka anyị nwere ike na ezigbo ibi ndụ Dubai. Dịka ọmụmaatụ, anyị emeela nnukwu WhatsApp WhatsApp maka Gulf na UAE. Ebe ahụ ndị ọhụrụ na-achọ enyemaka maka ịchọta ọrụ.
Anyị na - eji nkà na ụzụ ọhụrụ dịka Ngwa ngwa WhatsApp maka ndị na-ekpo ekwo na Gulf. Na nnukwu ihe ịga nke ọma ndị aga-aga ọhụrụ na-achọta ọrụ ebe ahụ. Mbanye ekwentị mkpanaaka na Dubai na-aga n'ihu na 2020.
Ekwentị igwe na-eme usoro ngwa ahia ngwa ngwa
Lee ole na ole arụmụka ngwa ngwa banyere usoro ịnwe ọzụzụ. Maka nke a karịa 70 pasent nke ndị na-achọ ọrụ na UAE. Iji ngwaọrụ mkpanaka kwa ụbọchị na ọrụ ha. Ihe akaebe kacha agba akaebe na-ekwu. Na ihe karịrị 81 pasent nke ndị ọrụ na-eji ngwa mkpanaka nke aka ha maka ọrụ. Ihe karịrị 23 pasent nke ndị na-achọ ọrụ na-achọ ọrụ nwere okwu ahụọrụ na Dubai maka India"Si na ekwentị mkpanaka ngwaọrụ.
n'ihi na nbanye na Dubai, enwere nyocha karịa karịa ị nwere ike iche. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-achọ agencieslọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ na Dubai. Ndị mmadụ nke ụbọchị a enweghị oge maka ọrụ nyocha ya mere ha ji ekwentị eme ya. Putzọ ya n'ụzọ ọzọ, imirikiti ndị mbịarambịa na-anwa ime nke ahụ ngwa ngwa o kwere omume. Toga na Google ma ọ bụ Bing na iji akara dee nkebi ahịrịokwu na ịnwa ị nweta azịza kachasị mma maka ha ajụjụ nyocha ọchụchọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọbụna ha na-achọ onye na-akwụ ụgwọ na Middle East. Naanị iji mee ya ngwa ngwa ma bụrụ ndị e goro na ụzọ dị mfe. Ihe niile dị maka ndị na-elekọta ha na-achọ ịchọta ọrụ na Middle East. N'ime android kwesịrị ngwa ngwa ka ewee goro ọrụ na UAE. Ebumnuche ndị a kwụsịrị iji laptọọpụ, ha na - eji ekwentị ugbu a. Otu ihe, ịmalite ngwa dị ngwa karịa ịmalite blọgụ ma ọ bụ desktọpụ. Gburugburu ekwentị na Dubai bụ ọdịnihu na UAE.
Ọrụ na Dubai na Abu Dhabi n’elu igwe
Ndị obodo na-achọ ọrụ na United Arab Emirates. Ugbu a bụ ụzọ isi rụọ ọrụ iji chọọ ohere n'Ịntanet. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-ebudata ngwa mkpanaaka na-emepụta akụkọ na ịtọ ntọala maka ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Mgbe ahụ na-agbalị ịmepụta ezigbo akụkọ mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, Linkedin ma ọ bụ Bayt. Na echere ọrụ na-agagharị banye igbe igbe email ha.
Ekwentị mkpanaaka maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ ọ bụla gburugburu ụwa. Ihe karịrị 95% nke ndị bi na iji mobi maka arụmọrụ kwa ụbọchị. Yabụ na site na nke a, enweghị ujo na nyocha ọhụụ na-abịa ọrụ na Dubai maka ndị ọfụfụ mba ụwa. Karịsịa site na ndị ọpụpụ na ahụmahụ zuru oke na azụmahịa. I nwekwara ike ịchọcha ya ọrụ ego na UAE n'elu mkpanaka gị.
Ịmara otu esi amalite oru na UAE. Ọ bụ isi ihe na-aga nke ọma na 2018 na 2019. N'ebe dị mma, na-achọgharị ohere ị na-achọgharị. Na ndị ọpụpụ na-achọta ọrụ ọrụ anyị na-enye aka. Ndị ọbịa ọhụrụ anyị maara kpọmkwem ebe ha kwesịrị itinye akwụkwọ CV. Ọzọkwa, otu esi elekwasị anya na post ọ bụla site na ụlọ ọrụ na-ewebata WhatsApp iji nweta ohere ndị ọzọ ka itinye n'ọrụ. Karịsịa site na mpaghara ụlọ ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ na ihe ndi anyi choro.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ị kwesịrị ịmalite ịchọ ngwa ọdịnala dị elu. Ebumnuche iji mee ka ahụmịhe ọchụchọ gị ekwentị ọzọ ezuru. I tosiri fEbumnuche ndị a na mbụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ngwa ngwa maka ọrụ. O doro anya, nke ahụ ga-enyere gị aka inweta ọrụ ngwa ngwa.
Dubai City WhatsApp mbanye na 2019
Site n'ebumnuche a, United Arab Emirates ndị na - ewe ndị ọrụ ahịa n'ọrụ, na ndị ọrụ chọrọ usoro ohuru di iche iche di ka Ngwá ọrụ mobile ngwaọrụ mkpokọta nke Gulf Mba. N'otu oge ahụ ọ bụrụ na ị na-enwe ezi mmekọrịta ọha na eze. Are na-aga iwelie mmasị nke ndị nwere ike ịrụ ọrụ na UAE. N’aka nke ọzọ, Citylọ ọrụ Dubai City nwere atụmatụ maka ịkwaga naanị na mkpokọ ekwentị na Dubai. N'ihi na dị ka anyị na-ahụ na Google n'elu 75% ndi oru ichu ahia n'oru ozo izipu ngwa.
N'okwu a, ụlọ ọrụ ịgba ụgwọ ndị ọhụrụ ahụ si na asọmpi pụta. Naanị ndụmọdụ ha na site enyere ndị na-achọ ọrụ na mobile ngwa ngwa na ndị na-achọ ọrụ ịchọta ọrụ na Dubai. Ọ dị mkpa ịghọta na kemgbe 2015 mgbe WhatsApp etoola karịa ndị ọrụ 1Bilion. Ruo ugbu a, mmadụ abụọ n'ime ndị ọrụ na-achọ ohere ọrụ ọhụụ na ama ha na India na United Arab Emirates.
Citylọ ọrụ Dubai City kemgbe ịmalite usoro WhatsApp ọhụrụ. Jikwaa arụmọrụ ọkọlọtọ, mana anyị agakwuru ndị ọrụ ekwentị. Ma nke ahụ bụ n’egbughị oge n’enyere ndị na-achọ ọrụ aka iwere ọrụ. Ekwentị ngwa ngwa na ekwentị Abu Abu na Dubai. N’ezie, a ka nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi gaa n’ihu n’abughi naanị a Nyocha WhatsApp. Anyị na-ekwe nkwa gị otu anyị ga-arụ ọrụ na ya ehihie na abalị iji mee ka i goro ego.
Nnyocha ọrụ nyocha na UAE
Ihe ka ukwuu na-egosi na ndị ọrụ ọhụrụ na Dubai hụrụ n'anya na mkpanaka anyị. Ọ bụ na ha niile ebulila bụ ụzọ mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ naanị iji nweta ekwentị. Dịka ọmụmaatụ, Facebook na Linkedin yana nnukwu ọrụ Portal Bayt na-enweta n'ọrụ maka ọrụ Airway. Gbalịsie ike na ị ga-aga saịtị niile gbasara ọrụ ndị Gulf. Ọrụ ndị ọrụ ọzọ n'ihi na ọ bụ nnukwu ụzọ mgbapụ gaa Dubai. N'ezie, UAE na-eburu ọrụ nrọ na-achọ ịgbanwe. Karịsịa mgbe ọbụna nnukwu ụlọ ọrụ kụrụ ahịa.
Ọ bụrụ na ị dị ugbu a tinye CV maka ọrụ MBA na ekwentị mkpanaaka gị. Gbaa mbọ hụ na-eme ya n’ụzọ kachasị arụmọrụ. Kedụ ihe bụ ahụmịhe dị ka i nwere site n’obodo nke gị? Nwere ike ịchọta ngwa ngwa ihe ịchọrọ?. Ọ dị ka ị nwere ahụmịhe zuru ezu na arụ ọrụ ahịa na ụdị onye ọrụ e tozuru etozu maka ụdị nrọ ọhụụ. Ọ bụrụ na azịza ya bụ Ee, na-agụ ihe anyị nwere ike imere gị.
Anyị guzosiri ike na ndị ọzọ ụlọ ọrụ nbanye na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka. Ha nwere ike ịtụ anya ma kpọtụrụ anyị site n'aka anyị WhatsApp iche iche na Dubai. N'ihi na anyị nọ ebe a iji nyere aka ha na-ewere ndị otu ọhụrụ n’efu. N'akụkụ dị mma, ụlọ ọrụ anyị na-arịwanye elu ma dịkwa ole na ole ekwentị mkpanaaka ọzọ na Emirates. Kemgbe 2016 Citylọ ọrụ Dubai City anaghị ahapụ ohere ịbanye n'ọrụ maka ndị si mba ọzọ. Ma ugbu a, mbanye Philipino ọrụ na-achọ na Dubai. Karịsịa inyere ndị na-aga ọhụrụ aka iru ndị na-ahụ maka ọrụ na ekwentị na Ọwara.
Kedu ihe ụlọ ọrụ anyị mere iji nyere gị aka ịgoro ọrụ?
Jiri nbudata ekwentị na Dubai
Ụlọ ọrụ anyị na-enyere aka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa dum ma kuziere ha otu esi eji ngwa ndị kachasị ewu ewu ugbu a, WhatsApp iji nweta ọrụ. Ohaneze na-ekwu maka ahụmịhe nke onwe anyị n'ime ọrụ nchọta ọrụ. Companylọ ọrụ anyị ewepụtala ọwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ. Maka nzube nke ikuziri ndị na-achọ ọrụ na UAE. Ebumnuche anyị bụ igosipụta nhọrọ ndị ọrụ gbagoro na Dubai.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-azụkwa ihe ndị ọhụrụ na-agagharị agagharị n'elu ahịa ụwa. Otu esi achọta onye onu ulo oru Dubai jiri otu ndị dị na Gulf n'ógbè. Ya mere, na nke a n'uche, ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Ị nwere ike jikọọ na ndị ọrụ nchịkọta na Linkedin.
Anyị na ụlọ ọrụ anyị, ịnwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ na na-eje ije na usoro nyocha maka ọrụ UAE. Ya mere, iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-agbalị mgbe nile iji kpuchie ụzọ ọ bụla ga-esi enyere gị aka ijikwa ụzọ maka ọrụ na Emirates.
Ma ọ bụ ọbụna chọpụta esi achọta ọrụ na họtel ahụ dị ka onye na-achọ ọrụ n'ụwa niile. Enweghị ihe ga-efunahụ gị ka ị na-agagharị na peeji nke ụlọ ọrụ anyị. Ihe niile ị ga - achọta bụ enyemaka bara uru nye gị. Na ibu smartzọ smart dị ka otu ọrụ na Dubai na Anu Dhabi. Maka ndị ọhụụ na-achụ nta ọrụ gburugburu ụwa. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ Pakistan, yana ndị India na South Africa onye ga-achọ inweta ọrụ na UAE.
Mobile ekwentị nbanye na Dubai
Citylọ ọrụ Dubai City na-agbanwe ọrụ ahia na United Arab Emirates. Usoro mbanye ekwentị mkpanaka na-agbanwe ahịa ahịa nke Middle East niile. Nke ahụ gụnyekwara Saudi Arabia ụlọ ọrụ maka ọrụ. Na ọbụna Qatar nnukwu ụlọ akụ na ụba ndị na-ahụ maka ịzụlite ahịa ahịa nke ekwentị mkpanaaka.
Anyị bụkwa ndị na-eduzi ebe ọrụ maka ọrụ ego na Dubai. Anyị nọ ebe a iji nyere ndị na-ewe ndị ọrụ ọrụ 'ọchụchọ maka talent' aka ịba uru. N'inye isi ihe ndị a, Citylọ ọrụ Dubai City kwagara n'ahịa ekwentị ekwentị dị ka anyị maara ndị na-arụrụ ọrụ ọrụ na Dubai anaghị akpọsa ọrụ nyere n'ụzọ ziri ezi.
Ụbọchị ndị a agafeela maka ịchọta nnukwu ụgwọ ọrụ n'ime ụbọchị ole na ole. Ọzọkwa, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịchọta ịchọta ọrụ a kwụrụ ụgwọ na UAE na-erughị afọ 1. Ị nwere ike iji ya na-arụsi ọrụ ike na ngwa ọrụ ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, na nke a, na-achọ ohere ọ bụla na-arụ ọrụ na saịtị ọrụ enwe ihe karịrị 50k ruo ọtụtụ afọ.
Oku ndi mmadu ji eme ihe ndi mmadu na ndi UAE
Dị ka anyị na-enyocha ahịa ịlele Dubai kemgbe 2009. Anyị na-achọ Ụgwọ ọrụ ọhụrụ na Middle East. Na nyocha nke ikpeazụ ruru ndị ọrụ ruru eru na Middle East na Asia. N’ezie, ndị njem ọhụụ na ụwa niile. Na-achọsi ike na-arụrụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ọ bụla ngalaba na United Atab Emirates.
Ụlọ ọrụ anyị Dubai na-anwa imeghachi ma nyekwuo ndị na-achọ ọrụ na UAE. A ghaghi icheta na ihe kachasị mma na UAE maka mobile bụ WhatsApp. Na n'ezie, anyị na-eji ya iji nweta mba ọhụrụ Ndị na-arụ ọrụ na UAE na 2018. Afọ ole na-abịanụ gafee, ọ ga - eweta mkpa ọhụrụ. Afọ ndị ọzọ 2019 na 2020 na-aga n'ihu. Ma ohuru ụlọ ọrụ ga-ewetara ọtụtụ ọrụ na-ewu ewu na Dubai.
The smartphone na-esiwanye ghọọ a recruiting ngwá ọrụ otú olileanya na ị ga-esonyere anyị WhatsApp iche iche na Dubai. N'ezie, ịkwesighi iji biri na Dubai ịchọta ọrụ. Ihe niile ị chọrọ inwe bụ a enyere aka ka ị na-achọgharị. Maka nzube nke ọrụ iji nweta ozi na Dubai. Banye na WhatsApp Otu dị na Dubai ma ọ bụ gaa na post Blog nke Dubai. Nwere ike ịchọpụta ihe gbasara ọrụ nkụzi na Dubai a na-akwụkwa ụgwọ ihe niile. Mbanye ekwentị na Dubai jiri ya wee nweta ọrụ na UAE.
Ụdị ohere ị nwere ike ịchọta
Otu n'ime ọnọdụ ndị ọhụrụ Ndị na-ele ọbịa na-achọ ọrụ akpaaka na Dubai. Ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ọrụ a ma ama na Ọwara. Dịka ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ na Dubai Porsche ma na-anya ụgbọ ala a. Bụrụ nrọ maka ndị ọbịa na otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma ugbu a na-akwụ ụgwọ. Ị nwere ike ịmalite ngwa ngwa dị ka ndị ahịa ahịa, onye ọrụ ekwentị ma ọ bụdị dịka onye nnabata ma ọ bụ onye isi ahịa maka ụlọ ọrụ a.
Na njedebe nke isiokwu anyị, ọ dị mkpa ka anyị kwuo banyere ndị a ma ama arụ ọrụ ego maka ndị na-ere ahịa. Site n'ụzọ a, ị nwere ike ịmalite ọrụ ego na Emirates. Anyị kwenyesiri ike na nke a bụ ihe kachasị eme ọfụma na ogologo oge ọrụ ị ga-ahụ UAE. Yabụ, n'ikpeazụ, anyị na-achọ gị chi ọma nyochaa ohere gị. Nwere olile anya na anyị ekpuchila ihe niile anyị maara gbasara ọrụ ndị Emirates. N'aka nke ọzọ, ị ga-elekwa anya n'ihe ụlọ ọrụ anyị na-enye ndụmọdụ maka expats. Otu kachasị mma bụ A Careerjet ọrụ search ụlọ ọrụ na Dubai na Ezigbo ebe a na-emepụta ihe na ebe nrụọrụ weebụ Monster Gulf. Ụlọ ọrụ ndị a dị ezigbo mkpa ịmalite ịkwado ọrụ ma tinye ya na CV gị.
Citylọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka ndị si mba ofesi na ndị na-achọ ọrụ mba ụwa na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.